सल्यानको थारमारेमा बैशाख ६ गतेदेखि बृहत महोत्सव लाग्ने, आउनेभए यी कलाकारहरु ?
सल्यानको थारमारेमा बृहत व्यापारिक तथा सांस्कृतीक महोत्सव संचालन हुने भएको छ ।
युनिभर्सल युथ क्लबकाे आयोजनामा थारमारे पाचाैँ व्यापारिक तथा साँस्कृतीक महाेत्सव २०५६ बैशाख ६ गतेदेखि १५ गतेसम्म जनकल्यान माविको प्राङ्गनमा महोत्सव संचालन हुने भएको हो । महोत्सवमा केन्द्रीय स्थरका चर्चिक कलाकारहरुको सहभागीता हुने क्लबका अध्यक्ष मदन बस्नेतले बताए ।
महोत्सवमा चर्चित कलाकार अन्जु पन्त, कुलेन्द्र विक, टंक बुढाथोकी, जिवन शर्मा, प्रकाश सपुत, कृष्ण रेउले, पुर्णकला विसी, चन्द्र शर्मा, हेमन्त शर्मा, शक्ती चन्द, भागिरथ चलाउने, तिलक ओली, दुर्गेश थापा, भुमिका गिरी लगाएतको प्रस्तुती रहने छ ।
त्यस्तै चर्चित हाँस्य कलाकार कमल गाउँले, हरि निरौँला (कक्रोज), सागर लम्साल (बले), प्रकाश कडेल (गुलेली कान्छा) पनि कार्यक्रममा आउने आयोजकले जनाएको छ । कार्यक्रममा बाल कलाकार असोक दर्जि र ए.आर. बुढाथोकीको समेत प्रस्तुती रहने बताइएको छ ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा अन्य थुप्रै राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरुको प्रस्तुती रहने आयोजकले जनाएको छ । महोत्सवलाई सह आयोजना छत्रेश्वरी म्यानेजमेन्ट प्रालि नेपालले गरेको छ ।
महोत्सवका अन्य आकर्षणहरुमा रोटेपिङ, बाल उद्यान, स्थानीय सांस्कृतीक झाँकी, सल्यानमा उत्पादित अर्गानीक बस्तुको स्टल र हरेक दिन लाइभ दोहोरी रहने कार्यक्रम संयोजक अनमेश केसीले बताएका छन् ।